Dib-u-dhaca Dawladda Hoose Ee Oodweyne!! Sayid Maxamed Cumar "Darwiishka"
Dib-u-dhaca Dawladda Hoose Ee Oodweyne!! Sayid Maxamed Cumar "Darwiishka"
Friday May 12, 2017 - 12:34:55 in by Samiir Cabdi
Murti dhaxal gal ah ama se aan idhaahdo hal-ku-dheg hirgalay, ayaa nuxurkiisu ahaa,"Habarjeclooy Muuse waa kaa!"Ta sadkeeda ayaan maanta wadaa. Oodweyne waa meel dawlad iyo shicibba laga wada shaqeeyo horumarkeeda misa na danta guud iyo geedi-socodkeeda loo darban yahay ma maqasheen in badan? Haddii aydaan midhaas maqal ma maqasheen midh kale, "Dawladda Hoose ee Oodweyne waa duceysan tahay oo degmadii way dhistay misana dhoodhoobtay"? Dabcan haa, anigaa ba weedhahan ay qaar ka mid ah qurba joogta iyo qaran joogtuba ay igu wareeriyeen. Xaqiiq waan ku dhego barjoobay illeyn dhabtaan ogahaye. Fahanku se waxa uu yahay,"Barnaamijka GPLG iyo Dawladda Hoose faraqa u dhaxeeya iyo kala ahaantooda oo isku curbo duuduubmay!" Taas aan intaa ku sii dhaafo, una biyo-dhaco dhanka i hafeefanaaya. Ha nixina wax kale ma aha e, qudhaata waa hal inaga maqan oo ah:"Reer Daadmadheedhoow Oodweyne waa kaa!"
Saaka 8-dii aroornimo waxa aan booqday xaruntaDawladda Hoose ee Degmada Oodweyne.Runtii yaab igumay noqon waxa aan arkay sababta oo ah waa arrin noqotay caado soo jireen ah oo lama jabshaan ah. Arrintaasina wax kale ma aha ee waa xarunta oo noqotay goob fadhiid ah oo aanay haba yaraate kaba socon wax adeeg bulsheed ahi.
Gabi ahaan ba xarunta waxay caan ku noqotay masuul maqan iyo xafiis xidhan. Rumeyso ama ha rumeysan waxaa furnaa hal xafiis oo qudhaata. Xafiiskaas waxa ka hawl gala labo wiil oo dhalliinyaro ah oo aad u firfircoon, Cartan Iyo Mustafe Faarax baa na la kala dhahaa. Xagga ay Xafiisyada intooda kale ay ka ahaayeen kuwo arbaaban. Sawirradan hoos jiraa waxa ay caddeyn buuxda u yihiin sida oo kale na ay muujinayaan xaqiiqda biyo-kama-dhibcaanka ah ee ka jirta Xarunta Dawladda Hoose ee Degmadda Oodweyne.
Haddii uu Boobe Yuusuf Ducaale Xisbiga Waddani uu ku eedayay "xafiisyo madhan iyo xilal madhan" Dawladda Hoose ee Oodweyna na waxa aan odhan karaa waa: "Xilal madhan iyo xafiisyo buuxa". Haa sababta ay u baaxanaa waa waraaqihii sannadkii hore oo wali tuulan. sababta oo ah waraaq ka baxdaaba ma jirto ama se way yar tahay, oo waa kuwo dhaska la daris noqday oo is dul tuulan. Hodhodho! Oo yaa isticmaali lahaa talow illeyn xafiis furan oo shaqo fuliyaa maba jira e? Been yaan laysu sheegin ee xaqiiqda ha la abbaaro maandheyaal.
Aan kaa qosliya e, dharaar ayaa waraabe la wayddiiyey, "Waraaboow waligaa caanaha midabkooda ma aragtey?” Isagoo isqaadqaadaya misana gafuurka taagaya ayuu ku jawaabay "Haa, waan arkay”. Laye, "bal hadda noo sheeg sida ay u eegb yihiin?” Kuye, "Habeen baan arkoo iyada oo muska la iskaga dhiibaayo oo waxa ay ahaayeen madow!” Hadda gara oo waxa uu miiskiinku arkay madowga dhiilka ay caanuhu ku jireen, mase arag caanaha gudaha doobiga dhex gurguuranaya. Ula-jeedka aan idiin dabbaalee waa jawaabaha ka soo burqanaya xildhibaanada kolka aad weyddiiso sida ay wax yihiin. Shakhsi ahaanna dhafarbaan ka qaadaa kolka aan maqlo weedhaha xuubka caarada ah ee bulshada lagu jaajaaminayo. Waxa aan maqli jiray "waxay na badeen waxa ka daran waxay na bareen.” Allow yaanay doogo nagu kicin ayaan anna ku duceysaa.
Dhammaan xildhibaanada maamulka iyo shaqaalaha ka hawlgala Dawladda Hoose ee Oodweyne waxaan odhan lahaa, "adeerayaaloow ummada u shaqeeya ama se de meesha iskaga taga oo banneeya illeyn meesha kamaydaan bixine! Badin mayo oo qayb labaad ayaad idin durduursiin, haddana waan idin rakaadsiin, se waxaan idin xasuusin lahaa tixdii Abwaan Axmed Ismaciil Diiriye "Qaasim” (AHN) uu lahaa:
"Isma doorin gaalkaan diriyo daar kii galaye"!
Sawirrada Xafiisyda Xidhan Ee Dowladda Hoose Ee Degmada Oodweyne